MAQAALKA ABUUKAR XAAJI: REER BARAAWE MEEL HOO U BAAHAN HADAL WAX KAMA TARO
November 1 2001 at 6:24 PM BAYDHABO PRESS
Inta aanan gudagalin mowduucayga, Waxaan jeclahay in aan marka hore dulmaro taariikhda Degmada Baraawe, bulshada ku nool, xadaaradeeda iyo xiriirka ka dhexeeya Tunnida iyo Gibilcadka Baraawe ku nool, waayo taariikhda waxaa laga bartaa nolosha Ummadaha, marxaladihii iyo dhacdooyinkii ay soo mareen.
Taariikhda waxaa kale oo ay gaashaan u noqon karta ama burin kartaa haddii cid isku daydo in ay taariikhda Ummadda ka been sheegto amaba isdaba mariso marxalladeeda si ay u marin habaabiso ama ra!yil caamka ah. Haddaba sida ay taariikhdu ay xuseyso , Degmada Baraawe waxaa deggan dadka asalka ee Dhulka loogu yimid (native or aboriginal), kuwaas oo ah TUNNI kuna abtirsada qowmiyadda Todoba Aw Digil iyo dad soo galeyto ah oo ka kala yimid Qaaradaha kale ee Adduunka oo la soo dejiyey, kadib markii ay Odeyaasha Beesha Tunni ka dalbadeen magan geliyo. Dadkaasi waxay ka koobnaayeen laba qabiil oo keliya: Hatimi & Biida.
Maanta bulshada Reer Baraawe waxay wadaagaan hal magac oo keli ah, caanna ku noqotay Dalka gudihiisa iyo Dibadiisa, kaasoo ah SHANGAMAAS IYO TODOBA TOL. Taariikhda marna ma xuseyso magacyada qabiilooyinka hadda la adeegsado sida: Reer Faqi, Asharaaf, Iskaashatada Biida iwm, kuwaas oo loo aaneynaayo in ay ka mid ahaayeen dadkii DAL-MAREENKA ahaa ee Baraawe la dejiyey waagaas.
Haddii qabiilooyinkaasi ay jiraan, waa dad ka soo farcamay labada qabiil ee kor ku xusan (Hatimi & Biida), hase ahaatee waxaa iga su!aal ah maxaa sababay in hadda la abuuro Magacyo aan horey loo isticmaali jirin isla markaana la tirtiro magacii soo jireenka ahaa ee qarniyo badan ay wadaageen Bulshada Reer Baraawe kaasoo ah Shangamaas & toddobo tol?
Aqoonyahaanada, Odeyaasha, iyo Waxgaradka ku shiray Manchester (U.K) ma waxay u shireen in ay isku keenaan Reer Baraawe mise in ay kala qaybiyaan, waayo go!aankooda wuxuu ku salaysan yahay in Beel waliba ay mas!uul ka noqoto arrimaheeda. Marka meeday midnimada ay ugu baaqeen mujtamacooda?
Warka ku qoran maqaalka ku soo baxay Riverineland ee 17/10/01, waa arrin runta ka fog, maxaa yeelay qoraha maqaalka Ali Faqay, ma xusin haba yaraatee nuxurka ay isku khilaafsan yihiin Reer Baraawe iyo cidda ka dambeysa amaba sabab u ah.
Xaqiiqadu waxay tahay in Bulshada Reer Baraawe aysan marna dhexdooda ka dhicin colaad nooc kasta ha ahaate mid addin ah, afka iwm, sida qabaa!ilada kale ee soomaaliyeed. Hase yeeshee waxaa la ogyahay in Gibilcadka (Hatimi & Biida) ay si bareer iyo sabab la!aan xiriirkii soo jireenka ahaa uga goosteen Tunnida, isla markaana ka baaqsadeen in ay bixiyaan wax allaale wixii taakulayn ahaa ee Degmada iyo maatada Reer Baraawe u baahnaayeen, ha noqoto xagga difaaca & horumarinta Degmada .
Eebbe ayaa ka markhaati ah, tan iyo intii dagaalladii sokeeye ka dhaceen Soomaaliya, bulshada loo yaqaano Todoba Tol ha ahaadeen kuwa Waddanka ku sugan ama kuwa Dibadda u qaxayba, waa laga waayay wax kaalmo ah, sidaasina waxay ku gabeen kaalintooda, kadib markii si ula kac ah u diideen in ay garab siiyaan walaalahooda Tunni ee gaashaan u noqday dhibaatooyinkii Degmada iyo mujtamaca Reer Baraawe ku dhacay.
Waxaannu markhaati ka nahay in sannooyinkan dambe ay Beesha Tunni uga dhinteen dad tiradooda aan la soo koobi Karin sababo kala duwan awgood hase yeeshee Todoba Tol marna uma soo gurmanin Tunnida. Meeday naxriistii iyo taakulaytii ay diinteenu innagu boorisey?
Ilaa iyo maantan dhibaatooyinkaas way taagan yihiin waxaana ku soo kordhay weerar joogto ah ee lagu haayo Beesha Tunni, kagana imaanaayo kooxo burcad oo is-bahaystey, oo doonaaya in ay barakiciyaan Tunnida. Weerarkii ugu dambeeyey wuxuu ka dhacay magaalada Baraawe gudaheeda iyo nawaaxigeedaba markay taariikhdu ahayd 25/10/01, dad badan oo maato ah laga dilay Tunnida, xoolahooda nool ahna laga xasuuqay qaarna la dhacay.
Haddaba waxaa la yiri DHAYDAADA CABBAA CAYDAADA YAQAAN, Gibilcadka Baraawe ma waxay iloobeen abaalkii loo galay markii ayagoo tabaalaysan ay soo magan galeen Odeyaasha Tunnida isla markaana si islaanimo ah oo bani!aadannimo ku jirto loo soo dhoweeyey lana dejiyey Dhulka Baraawe shuruud la!aan ila qarnigaanna si xushmad, qaddarin iyo nabadgelyo ku dheehan tahay ugu nool yihiin Baraawe iyo nawaaxigeedaba.
Waxaa la yiri Runta haddii aan la sheegin, been, khuraafad iyo nifaaq ayaa u qarsoon, taas Waxaan ula jeedaa in Todoba Tol ilaa iyo hadda aysan dareemin ama kama damqanin dhibaatooyinka walaalahooda loo geysanaayo oo ku dhacaayo, haddii kale kama aamuseen ee way la qaybsan lahaayenn HIIL & HOBA amaba Adduun-weynaha ayey u qaylo dhaami lahaayeen si walaalahooda loogu soo gurmado, taas xitaa waa laga waayey.
Waxaa lama huraan ah in la xasuusto in dhib kasta oo dhacda ama bani!aadan soo gaara, uu ka dambeyn doono BAD BAADA ALLE , sidaas awgeed Todoba tol ha ogaadaan in jiilkaani aanu la mid noqonayn kuwii dejiyay ayaga markii ay macluusha ka muuqatay ee Demada Baraawe soo gaareen.
Waxay ila tahay in aan loo baahnayn intaas in ka badan in aan ka sheego gibil cadka Baraawe ama Todoba Tol (qof kasta sida uu yaqaano), maxaa yeelay inta la wada ogyahay ayaa tilmaan ugu filan, laakinse Waxaan maqaalkan ku soo gebe-gebeenaaya MEEL HOO U BAAHAN HADAL WAX MA TARO, haddii walaaltinimo, iyo beelnimo ay jirto, waa in Todoba Tol ay garab istaagaan walaalahooda Tunnida (dhib & dheef, nabad & colaadba) oo maantan dagaal xaq ah kula jira Burcad hubeysan iyo jid gooyeyaal caadaystay in ay ku kacaan falal xaaraan ah diinta islaamkana ka soo horjeeda, lidna ku ah bulshada Reer Baraawe, Eebbena noo baneeyay in aannu ka hortegno falalkaasi, dembilayaashana lala tiigsado tallabadii ku habboon ee diinteenna iyo sharicadeena waafaqsan.
Ha waarto midnimada dhabta ee munaafiqnnimo ka nasaxan.
W.Q. Abuukar Xaaji
Amaan iyo mutnaan - Aweis Amin sheikh on Nov 3, 2001
war celin yer oo ku saabsan maqaalka abuukar xaaji - shariifahmed on Nov 5, 2001